Date: 31 août 2017 - 14:13
Te hahafantatra ny conditions sy ny fandehan'ny disponibilité any amin'ny secteur privé raha misy mahafantatra :
Ny halavany (durée minimale sy maximale)
Ny fepetra ahazoana azy
Ny lalànamifehy ny olona nahazo disponibilité sns.
Date: 31 août 2017 - 16:15
Ireto aza ny valiny eh!
Ny halavany (durée minimale sy maximale) >> 15cm
Ny fepetra ahazoana azy >> 18 ans minimum
Ny lalànamifehy ny olona nahazo disponibilité >> tsy mahazo mijangajanga
tsy misy isaorana eh!
Date: 31 août 2017 - 16:25
ty Njoun ty zany dian olona tsy de misy atao mihintsy kan, serieux mamalimaly fantany fotsiny, tsy fantany mihintsy fa matoa ny olona manotany eto dia tena mba important aminy ilay izy, oupsss nefa enao dia mampimé vahoaka hoy ny tanora izay.
Date: 06 septembre 2017 - 10:52
Tsy misy lalàna mifehy ny fangatahana disponibilité fa ze ifanarahanao sy ny ao am-piasana iany.
Rehefa ande ianao dia tsy oe omena STC kory, fa miandry anao ao ny congé anao sy ny ancienneté fa kosa tsy midika ho engagement ho an société izay hoe raha mila olona tampoka izy nefa ianao mbola tsy tonga dia oe tsy mahazo mi recruté izy.
Ra maka disponibilité zany enao dia midika fotsiny oe mety mbola ho raisin'ny fesana rhf miverina, fa ts engagement akory izay fa mety ko oe tsisy poste ho anao intsony ko.
Date: 06 septembre 2017 - 11:03
jereo >>> Jereo tsara kosa fa tena mahavaly ny fanontanian'i dispo ireo eh!, ary manaraka norme tsara
Date: 10 septembre 2017 - 16:13
Misaotra betsaka an'i rh fa mazava be ny valinteny. Manana fanontaniana kely aho taorian'ny valinteninao.
Ianao miteny hoe tsy obligation-n'ny orinasa ny mandray ahy rehefa miverina, raha toa ka tsy handray azy izy dia rehefa fotoana inona izy no-minotifier ahy hoe tsy handray ahy intsony pour une raison X ou Y : rehefa hiverina aho sa alohan'ny hiverenako (sao manko hoe miverina aho izany amin'ny andro nifanarahana hoe miverina dia tonga any aho dia hoe tsy handray anao intsony izahay). Rehefa tsy handray ahy intsony izy izany vao raisiko ny STC-ko ?
Ary izaho nandray disponibilité indray ohatra hoe un an no nifanarahanay, au bout de 3 mois ohatra mahita asa cdd de six mois ohatra, manana droit ve aho hanao an'io asa temporaire io sa mila mi-informer ny orinasa sns.
Date: 18 septembre 2017 - 11:33
Ra tsy andray anao intsony izy dia rhf miverina ianao no omeny ny STC
Ilay cas faharoa indray dia tena mauvaise foi ndray ny anao ary afaka enjehin'ny orinasa mihintsy ianao. lasa ianao indray no mando préavis.